Herisetra ara-pananahana :: Ankizivavy 11 taona bevohokan-drainy • AoRaha
Herisetra ara-pananahana Ankizivavy 11 taona bevohokan-drainy
Nosamborin’ny zandary avy hatrany ity lehilahy iray tany Andrianabe-Ambanja, afak’omaly hariva. Notorian’ny vadiny noho ny herisetra ara-pananahana nataony tamin’ny zanak’izy ireo vavy, 11 taona, io lehilahy io. Mitondra vohoka valo volana vokatry ny herisetra ara-nofo nihatra taminy ilay ankizy, izay vao hitan’ny reniny ary izao miafara any amin’ny mpitandro filaminana izao ny raharaha.
Mipetraka any amin’ny rainy iry zaza satria nisaratoerana ny ray aman-dreniny. Monina sy mamboly any Mahavanona kaominina Ambohitrandriana-Ambanja ilay renim-pianakaviana. « Tonga namangy azy ny zanany vavy sady nangataka fanampiana taminy amin’ny fanomanana ny fiterahany. Teo vao taitra ny reniny ka nanontany anjanany hoe fa iza no rain’ny zaza? Namaly tsy am-pihambahambana ilay zaza fa ny rainy ihany no nahabevohoka azy. Nametraka fitoriana tany amin’ny tobin’ny zandary any Marovato avy hatrany io vehivavy io, taorian’izay”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Rehefa vita fakàna am-bavany izy mianaka no niroso tamin’ny fikarohana an’iry ray nahavanon-doza ireo mpitandro filaminana. Tratra sy nalaina tany Andrianabe izy. Voatazona ao amin’ny tobim-paritry ny zandarimaria any Marovato io lehilahy io, hatramin’ny omaly.
“Nandà ny fiampangana azy itsy lehilahy voatondro ho nanolana an-janany itsy tamin’ny voalohany. Rehefa nampifanatrehana tamin’ny zanany vavy anefa izy no niaiky ihany fa izy no nahabevohoka ny zanany”, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana.
Fahatrarana mpaka an-keriny Maty voatifitra teo amin’ny feny i Del Kely
Fifindra-monina an-tsokosoko Voasambotra ilay vehivavy nanondrana olona valo tsy hita popoka
Lozam-pifamoivoizana Olona efatra maty tao anaty fiara Starex
Fisandohana Mpisoloky fiara mialokaloka amin’ny resaka politika
Savorovoro tany Ambatondrazaka :: Olona valo naratra tamin’ny fifandonana foko roa
Ahiahy vono olona :: Mpivady niaraka hita faty teny Ampandrana
Fifaninanan-kira TF1 Tafita amin’ny famaranan’ ny «The Voice» i Marghe
Fanakorontanana sy fanimbana Olona dimy amby efapolo voasambotra tany Antsirabe